Umhlahlandlela We-Roulette eku-inthanethi | Dlala Imidlalo Yamahhala Ye-Roulette (Akukho Ukudawuniloda Futhi Akukho Idiphozithi Edingekayo)
Ikhaya / Imihlahlandlela / umhlahlandlela wegeyimu i-roulette
Umhlahlandlela Wegeyimu i-Roulette
Sekungamakhulu eminyaka abantu bebize iRoulette njengeNkosi yemidlalo yasekhasino, futhi ngezindlela eziningi injalo-hhayi okuncane kunakho konke ngoba kusekelwe ku-100% ngenhlanhla, okwenza kube yindlela emsulwa yokugembula ekhona. Umphumela awukwazi ukubikezelwa noma ukukhishwa, ngakho-ke unethuba elifanayo nayo yonke i-spin.
Ku-roulette yekhasino eku-inthanethi, kunamasondo anezikhala ezingu-36 kuwo. Ukunqoba umdlalo we-roulette, kufanele uqagele kahle ukuthi ibhola elincane lizophelela kuphi lapho liphonswa ku spinning wheel. Uzokhokhelwa ngokungafani.
Idlalwa kanjani i-roulette
Eduze kwesondo le-Roulette kunebhodi enezinombolo kulo, ezimele zonke izikhala ezingenzeka ukuthi ibhola lingagcina likhona. Wenza ukubheja ngokubeka ama-chips enombolweni ocabanga ukuthi izowina.
Lapho-ke umthengisi ujika isondo, bese ephonsa ibhola elincane kulo, alivumele lishaye lizungeze. Izophumula kwesinye sezikhala ezibaliwe – futhi leyo nombolo ingumnqobi.
Ukhiye wokudlala i-roulette ephumelelayo ukuqonda ukuthi ungenza ukubheja okungaphezu kokukodwa kunoma iyiphi i-spin enikeziwe, nokwazi ukuthi yikuphi ukubheja okutholakalayo. Izinga eliphakeme kakhulu lokukhokha kwi-European Roulette imvamisa lizungeze u-35: 1 kanti i-American Roulette ingu-36: 1 – inikezwa ngokuqagela kahle ukuthi iyiphi ibhola elizophelela kuyo, kepha lokhu akulona nje kuphela ithuba okunikezwa lona. Izinombolo zihlukaniswe ngamaqoqo amathathu, futhi ungabheja u-2: 1 ukuthi ibhola lizohlala ngaphakathi kwelinye lamaqoqo. Futhi ungabheja okulinganayo kuyo okuphuma ngenombolo eyinqaba, inombolo efanayo, noma komunye wemibala emibili etholakalayo (ngokuvamile ebomvu nebomnyama).
Two Number split 17 to 1
Three Number street 11 to 1
Four Number square 8 to 1
Six Number line 5 to 1
Isu elaziwa kakhulu leRoulette libizwa ngokuthi Martingale Method. Dlala umdlalo weRoulette, futhi uma uhlulwa, phinda ukubheja kwakho. Qhubeka ukuphinda kabili ukubheja kwakho uze uwine. Ngaleyo ndlela, uma uwina, ubuyisa khona manjalo konke okulahlekile ukuze uzuze. Le ndlela iyasebenza, kepha inempumelelo elinganiselwe kumatafula anemikhawulo ephezulu yokubheja.
Isu eliphumelela kakhulu libizwa ngePinder-Schloss Split, futhi lisebenza ngokubheja kuphela kumaqoqo ezinombolo. Ukuqoqwa ngakunye kwezinombolo eziyi-12 kuthwala inkokhelo engu-2: 1. Ukumboza konke kuzoholela ekuwineni okuqinisekisiwe ngaso sonke isikhathi, kepha futhi nokulahleka kwe-net. Isu lePinder-Schloss Split ukubeka ukubheja okuphezulu kumaqoqo angu-2 kwayi-3, ikunikeze ithuba elingu-66% lokuwina ku-spin ngayinye. Uzohlala ulahlekelwa ukubheja okukodwa, kepha uma ubuya, uhola u-50% ekukhishweni kwakho okuphelele njalo lapho uphumelela. Isibonelo, ake sithi ubeka u-R500 lilinye emaqenjini awu-2, bese kuthi elinye lawo liphumelele. Ulahlekelwa ukubheja kwakho okungu-R500, kodwa okunye kukubuyisela u- $ 1,000 kanye nokubheja kwakho kokuqala. Ngakho-ke wenze inzuzo engu- $ 500 ngokubheja ngo- $ 1,000.